buddha – Page2– Dhammadīpa
Friendship, Companionship, Comradeship
Posted on 1 Jul 2017 by Ashin Sopāka
Venerable Ānanda approached the Gracious One, paid homage, sat down to one side, and said to him: “Venerable sir, this is half of the holy life, that is, good friendship, good companionship, good comradeship.”
“Not so, Ānanda! Not so, Ānanda! This is the entire holy life, Ānanda, that is, good friendship, good companionship, good comradeship. Whenabhikkhu hasagood friend,agood companion,agood comrade, it is to be expected that he will develop and cultivate the Noble Eightfold Path.” – SN 45.2
Ekamantaṁ nisinno kho āyasmā ānando bhagavantaṁ etadavoca: “upaḍḍhamidaṁ, bhante, brahmacariyaṁ, yadidaṁ—kalyāṇamittatā kal­yāṇa­sahāyatā kal­yāṇa­sampa­vaṅkatā”ti.
“Mā hevaṁ, ānanda, mā hevaṁ, ānanda. Sakalamevidaṁ, ānanda, brahmacariyaṁ, yadidaṁ—kalyāṇamittatā kal­yāṇa­sahāyatā kal­yāṇa­sampa­vaṅkatā. Kal­yāṇa­mittas­setaṁ, ānanda, bhikkhuno pāṭikaṅkhaṁ kal­yāṇa­sahāyassa kal­yāṇa­sampa­vaṅkassa—ariyaṁ aṭṭhaṅgikaṁ maggaṁ bhāvessati, ariyaṁ aṭṭhaṅgikaṁ maggaṁ bahu­līka­ris­sati.”
ထိုအခါ အသျှင်အာနန္ဒာသည် မြတ်စွာဘုရားထံသို့ ချဉ်းကပ်၍ မြတ်စွာဘုရားကို ရှိခိုးပြီးလျှင် တစ်ခုသော နေရာ၌ ထိုင်နေပြီးသော်မြတ်စွာဘုရားအား ဤစကားကို လျှောက်၏— “အသျှင်ဘုရား မိတ်ဆွေကောင်းရှိသည်၏ အဖြစ် အပေါင်းအသင်းကောင်းရှိသည်၏ အဖြစ် မိတ်ဆွေကောင်းတို့၌ ကိုင်းရှိုင်းသည်၏ အဖြစ်သည် အကျင့်မြတ်ကို ထက်ဝက်ပြီးစေနိုင်ပါ၏”ဟု (လျှောက်၏)။
“အာနန္ဒာ ဤသို့ မဆိုလင့်၊ အာနန္ဒာ ဤသို့ မဆိုလင့်၊ အာနန္ဒာ မိတ်ဆွေကောင်းရှိသည်၏ အဖြစ်အပေါင်းအသင်းကောင်းရှိသည်၏ အဖြစ် မိတ်ဆွေကောင်းတို့၌ ကိုင်းရှိုင်းသည်၏ အဖြစ်သည် အကျင့်မြတ်ကို အလုံးစုံပင် ပြီးစေနိုင်၏၊ အာနန္ဒာ မိတ်ဆွေကောင်း, အပေါင်းအသင်းကောင်းရှိ၍ မိတ်ဆွေကောင်းတို့၌ ကိုင်းရှိုင်းသော ရဟန်းအား အင်္ဂါရှစ်ပါးရှိသောအရိယမဂ်ကို ပွားများနိုင်လိမ့်မည်၊ အင်္ဂါရှစ်ပါးရှိသောအရိယမဂ်ကို ကြိမ်ဖန်များစွာ ပြုနိုင်လိမ့်မည်ဟူသော ဤအကြောင်းကို မချွတ် (ရလိမ့်မည်ဟု) မျှော်လင့် အပ်၏။
Rồi Tôn giả Ānanda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Tôn giả Ānanda bạch Thế Tôn: “Một nửa Phạm hạnh này, bạch Thế Tôn, là thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình.”
“Chớ có nói vậy, này Ānanda! Chớ có nói vậy, này Ānanda! Toàn bộ Phạm hạnh này, này Ānanda, là thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình. Với Tỷ-kheo thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình, này Ānanda, thời được chờ đợi Thánh đạo Tám ngành được tu tập, Thánh đạo Tám ngành được làm cho viên mãn.”
White Throated Kingfisher ©Ashin Sopāka 2017
Posted in Dhamma	| Tagged buddha, dhamma, friendship, kalyanamitta
Buddha TendsaSick Monk
Posted on 17 Jun 2017 by Ashin Sopāka
“Monks, you have no mother or father to look after you. If you do not look after each other who will? He who would nurse me, let him nurse the sick.” -Vin i 268–Vin i 311
Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno kucchi­vikārā­bādho hoti. So sake muttakarīse palipanno seti … Atha kho bhagavā āyasmantaṁ ānandaṁ āmantesi—“gacchānanda, udakaṁ āhara, imaṁ bhikkhuṁ nahāpessāmā”ti. Bhagavā udakaṁ āsiñci. Āyasmā ānando paridhovi. Bhagavā sīsato aggahesi. Āyasmā ānando pādato uccāretvā mañcake nipātesuṁ. Atha kho bhagavā etasmiṁ nidāne etasmiṁ pakaraṇe bhikkhusaṁghaṁ sannipātāpetvā bhikkhū paṭipucchi – “Kissa taṁ bhikkhū na upaṭṭhentī”ti?
“Ahaṁ kho, bhante, bhikkhūnaṁ akārako; tena maṁ bhikkhū na upaṭṭhentī”ti.
“Natthi vo, bhikkhave, mātā, natthi pitā, ye vo upaṭṭhaheyyuṁ. Tumhe ce, bhikkhave, aññamaññaṁ na upaṭṭha­his­satha, atha ko carahi upaṭṭhahissati? Yo, bhikkhave, maṁ upaṭṭhaheyya so gilānaṁ upaṭṭhaheyya.”
တရံရောအခါ တပါးသောရဟန်းအား ဝမ်းသက်သောရောဂါ ဖြစ်၏။ ထိုရဟန်းသည် မိမိကျင်ကြီးကျင်ငယ်၌ လူးလှမ့်လျက်အိပ်ရ၏။ ထို့နောက် မြတ်စွာဘုရားသည် အသျှင်အာနန္ဒာကို “အာနန္ဒာ သွားချေ၊ ရေဆောင်ယူခဲ့လော့၊ ဤရဟန်းကို ရေချိုးကုန်အံ့” ဟု မိန့်တော်မူ၏။ “ကောင်းပါပြီ အသျှင်ဘုရား” ဟု ဆို၍ အသျှင် အာနန္ဒာသည် မြတ်စွာဘုရားအား ဝန်ခံ၍ ရေကိုဆောင်ယူလာ၏၊ မြတ်စွာဘုရားသည် ရေကိုသွန်းလောင်းတော်မူ၏၊ အသျှင်အာနန္ဒာသည် ဆေးကြောလေ၏၊ မြတ်စွာဘုရားသည် ဦးခေါင်းမှ ကိုင်ယူတော်မူ၏၊ အသျှင်အာနန္ဒာသည် ခြေထောက်မှ ချီမ၍ ညောင်စောင်း၌ အိပ်စေကုန်၏။ ထို့နောက် မြတ်စွားဘုရားသည် ဤအကြောင်းအရာကြောင့် ရဟန်းအပေါင်းကို စည်းဝေးစေပြီးလျှင် ရဟန်းတို့ကို “ရဟန်းတို့ အဘယ်ကြောင့် ထိုရဟန်းကို မလုပ်ကျွေးကုန်သနည်း” ဟု (မေးတော်မူ၏)။
“အသျှင်ဘုရား ဤရဟန်းသည် ရဟန်းတို့အား မလုပ်ကျွေးဘူးပါ၊ ထို့ကြောင့် ထိုရဟန်းကို ရဟန်းတို့သည် မလုပ်ကျွေးပါကုန်” ဟု (လျောက်ကုန်၏)။
ရဟန်းတို့ သင်တို့အား လုပ်ကျွေးမည့် အမိအဖတို့ မရှိကုန်၊ ရဟန်းတို့ သင်တို့သည် အချင်းချင်း မလုပ်ကျွေးခဲ့လျှင် အဘယ်သူသည် လုပ်ကျွေးလတ္တံ့နည်း။ ရဟန်းတို့ ငါဘုရားကို လုပ်ကျွေးသော ရဟန်းသည် နာဖျားသော ရဟန်းကို လုပ်ကျွေးရာ၏။
Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh kiết lỵ. Vị ấy nằm dài ở đống phân và nước tiểu của chính mình, bị lem luốc … Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo đại đức Ānanda rằng:—“Này Ānanda, hãy đi và mang nước lại. Chúng ta sẽ tắm cho vị tỳ khưu này.”—“Bạch ngài, xin vâng.” Rồi đại đức Ānanda nghe theo đức Thế Tôn đã mang nước lại. Đức Thế Tôn đã xối nước. Đại đức Ānanda đã rửa ráy toàn bộ. Rồi đức Thế Tôn đã đỡ phần đầu, đại đức Ānanda ở phần chân, đã nâng lên và đặt ở trên giường. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại rồi hỏi các vị tỳ khưu rằng: “Vì sao các tỳ khưu không phục vụ vị ấy?”
“Bạch ngài, vị tỳ khưu ấy là người không có làm gì cho các tỳ khưu, do đó các tỳ khưu không phục vụ vị ấy.”
“Này các tỳ khưu, các ngươi không có mẹ, không có cha là những người có thể phục vụ các ngươi. Này các tỳ khưu, nếu các ngươi không phục vụ lẫn nhau thì giờ đây ai sẽ phục vụ đây? Này các tỳ khưu, vị nào có thể phục vụ ta, vị ấy có thể phục vụ người bệnh.
“Yo, bhikkhave, maṁ upaṭṭhaheyya so gilānaṁ upaṭṭhaheyya.”
Posted in Monasticism	| Tagged buddha, compassion, dhamma, monk, sick
Posted on 11 Feb 2017 by Ashin Sopāka
“Outside of here there are many other doctrines;
Those paths don’t lead to nibbāna, but this one does.
Indeed, the Blessed One himself counsels the Saṅgha;
The Teacher shows the palms of his hands.” – Thag 1.86 Nāgita
“Ito bahiddhā puthu aññavādinaṁ,
Maggo na nibbānagamo yathā ayaṁ;
Itissu saṅghaṁ bhaga­vānu­sāsati,
Satthā sayaṁ pāṇitaleva dassayan”ti.
နိဗ္ဗာန်သို့လားရောက်စေတတ်သော အင်္ဂါရှစ်ပါးရှိသော ဤအရိယမဂ်သည် ငါဘုရားသာသနာတော်၌ ရှိသကဲ့သို့ သာသနာ့ပြင်ပဖြစ်သော အမျိုမျိုးသောတိတ္တိတို့ အယူ၌ နိဗ္ဗာန်သို့ လားရောက်စေတတ်သော မဂ်မည်သည် မရှိဟု ငါတို့၏ဆရာ မြတ်စွာဘုရားသည် ကိုယ်တိုင်သာလျှင် သယမ္ဘူဉာဏ်ဖြင့် သိတော်မူအပ်သော တရားတော်ကို လက်ဝါးပြင်၌ ပြတော်မူလျက် ရဟန်းအပေါင်းကို ဆုံးမတော်မူ၏။
“Bên ngoài đây (Giáo Pháp này), đạo lộ của các vị thuyết giáo khác,
đủ các hạng, không dẫn đến Niết Bàn giống như cái này,
đức Thế Tôn chỉ dạy hội chúng như vậy,
bậc Đạo Sư chỉ cho thấy chính lòng bàn tay của mình.”
Sun Skink ©Ashin Sopāka 2016
Posted in Dhamma	| Tagged buddha, dhamma, open palms
Posted on 12 Nov 2016 by Ashin Sopāka
“The wealth of faith, the wealth of virtuous behaviour,
the wealth of learning and generosity,
with wisdom, the seventh kind of wealth;
“When one has these seven kinds of wealth,
“Therefore an intelligent person,
should be intent on faith and virtuous behaviour,
confidence and vision of the Dhamma.” – AN 7.6 (Bodhi)
hirī ottappiyaṁ dhanaṁ;
paññā ve sattamaṁ dhanaṁ.
“Yassa ete dhanā atthi,
Adaliddoti taṁ āhu,
amoghaṁ tassa jīvitaṁ.
“Tasmā saddhañca sīlañca,
saraṁ buddhāna sāsanan”ti.
“ယုံကြည်မှု ‘သဒ္ဓါ’ ဥစ္စာ၊စောင့်ထိန်းမှု ‘သီလ’ ဥစ္စာ၊
ရှက်မှု, ကြောက်လန့်မှု ‘ဟိရီ သြတ္တပ္ပ’ ဥစ္စာ၊
အကြားအမြင် ‘သုတ’ ဥစ္စာ၊ စွန့်ကြဲမှု ‘စာဂ’ ဥစ္စာ၊
ခုနစ်ခုမြောက် သိမှု ‘ပညာ’ ဥစ္စာတို့တည်း။
အကြင်မိန်းမအား ဖြစ်စေ အကြင်ယောကျာ်းအား ဖြစ်စေ ထိုသူတော်ကောင်း ဥစ္စာတို့သည် ရှိကုန်၏၊
ထိုသူတော်ကောင်း ဥစ္စာရှိသော မိန်းမယောကျာ်းကို မဆင်းရဲသူဟူ၍ ပညာရှိတို့ ဆိုကုန်၏၊
ထိုသူ၏အသက်ရှင်ခြင်းကို အချည်းနှီး မဟုတ်ဟု ဆိုကုန်၏။
ထို့ကြောင့် ပညာရှိသည် ဘုရားသျှင်အဆုံးအမတော်ကို အောက်မေ့လျက်
(သစ္စာလေးပါးတရား) ကို မြင်ကြောင်းဖြစ်သော သီလကိုလည်းကောင်းအဖန်ဖန်အားထုတ်ရာသတည်း။”
Barred Buttonquail ©Ashin Sopāka 2016
Posted in Dhamma	| Tagged buddha, dhamma
Myanmar Calendar – April 2020
Myanmar Calendar – March 2020